အသက် ငါးနှစ်အရွယ် ကလေးက ၎င်းခံစားရသည့် ကင်ဆာရောဂါ ကုသနိုင်ရန် တိရစ္ဆာန်ရုပ်ပုံ ၃၀၀ဝ ကျော် ရေးဆွဲရောင်းချ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အသက် ငါးနှစ်အရွယ် ကလေးက ၎င်းခံစားရသည့် ကင်ဆာရောဂါ ကုသနိုင်ရန် တိရစ္ဆာန်ရုပ်ပုံ ၃၀၀ဝ ကျော် ရေးဆွဲရောင်းချ
အသက် ငါးနှစ်အရွယ် ကလေးက ၎င်းခံစားရသည့် ကင်ဆာရောဂါ ကုသနိုင်ရန် တိရစ္ဆာန်ရုပ်ပုံ ၃၀၀ဝ ကျော် ရေးဆွဲရောင်းချ
Posted by မမေလး on May 16, 2011 in News |7comments
အသက္ ငါးႏႇစ္အရြယ္ ကေလးက ၎ခံစားရသည့္ ကင္ဆာေရာဂါ ကုသႏိုင္ရန္ တိရစၧာန္႐ုပ္ပံု ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ေရးဆြဲေရာင္းခ်
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကင်းဆတ်မြို့မှ အသက် ငါးနှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦးသည် ၎င်းခံစားရသည့် ကင်ဆာရောဂါ ကုသနိုင်ရန် ၎င်းကြိုက်နှစ်သက်သည့် ကြောက်မက်ဖွယ် ဧရာမ တိရစ္ဆာန်ပုံ ၃၀၀ဝ ကျော်ကို ရေးဆွဲရောင်းချခြင်းဖြင့် ဆေးကုစရိတ် ရှာဖွေခဲ့သည်။ အသက် ငါးနှစ်အရွယ်ရှိ အိုင်ဒန်ရိဒ်သည် သွေးကင်ဆာကို ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် ဆိုးရွားစွာ ခံစားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ရိဒ်သည် ဓာတုကုထုံး၊ ကျောရိုးဖောက် ကုသမှုနှင့် အခြား နာကျင်သည့် ကုသမှုများဖြင့် လပေါင်းများစွာ ကုသမှု ခံခဲ့ရသည်။ ရောဂါကုသမှု ကုန်ကျစရိတ်အတွက် ရိဒ်သည် ကြောက်မက်ဖွယ် ဧရာမ တိရစ္ဆာန်ပုံ ၃၀၀ဝ ကျော်ကို ရေးဆွဲရောင်းချပြီး ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏မိဘများသည် သားဖြစ်သူ၏ ရောဂါဝေဒနာကြောင့် ဝမ်းနည်းပက်လက် ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက အိုင်ဒန်ရိဒ် ခံစားနေရသည့် ကင်ဆာရောဂါသည် ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်း ကုသ၍ ပြန်လည် ပျောက်ကင်းမည့်ရောဂါ အဖြစ် မျှော်လင့်ချက်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ရိဒ်၏မိဘများသည် ဆေးကုသမှု ကုန်ကျစရိတ် မြင့်တက်မှုနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီး ဆေးကုသမှု စရိတ်ပေးရန်အတွက် နေအိမ်ကို ရောင်းချရန် ဈေးကွက်တင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ရိဒ်က တိရစ္ဆာန်ပုံများ ရေးဆွဲရောင်းချ၍ ဆေးကုစရိတ် ရှာကြံခဲ့ရာမှ အိမ်ကို ရောင်းချရန် မလိုအပ်တော့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရိဒ်သည် ယင်းပုံများကို ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှု ခံရစဉ်အတွင်း ၎င်းကုတင်ပေါ်တွင် ပုံကြမ်းရေးဆွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းရေးဆွဲသည့်ပုံများ ရောင်းချခဲ့ရာတွင် အံ့ဩဖွယ် ကောင်းလောက်အောင် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ဝ ကျော် ရရှိခဲ့ပြီး ပုံဝယ်ယူခဲ့သူများကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။
ကံမကောင်းတော့ ငယ်ငယ်လေးနဲ့ သွေးကင်ဆာကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံစားရတယ်။ ကံကောင်းတော့ ရောဂါက ကုသလို့ ပျောက်နိုင်တယ်။ ကံမကောင်းတော့ ဆေးကုသစရိတ်က ကြီးလွန်းလို့ မတတ်နိုင်။ ကံကောင်းတော့ ပုံဆွဲပြီး ဆေးကုသစရိတ်ရှာနိုင်တယ်။ ဒီ့နောက်ပိုင်းတော့ ကောင်းတဲ့ကံတွေပဲ ခံစားရပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ကလေးလည်း ဝဋ်ပဲ။ နာကျင်မှု နဲ့ ဘဝနေ့စွဲတွေ ဖြတ်သန်း နေရပါလား။
အမေရိကန်က ကိုကိုမမများ ပန်းချီကားလေးသွားပြီး အားပေးလိုက်ဦးနော် … ကလေးလေးက ချစ်စရာလေး ..
စီစဉ်ပေးတဲ့သူတွေရဲ့ ပရိုဂရမ်တွေရယ်ကို ဘဲ စိတ်ဝင်စားတယ်
ဒကာ မိုက်ဂျော်ပု ရုပ်ပုံကို မစွဲလန်းနဲ့လေ။ ရုပ်ပုံဆွဲခြင်းအတတ်ကို စိတ်ဝင်စားတာရင် တော်ပါပြီ။ (မြန်မာ့မီးရထားရဲ့ အကွက်ထဲ ဝင်လာတုန်း နှက်လိုက်ဦးမယ်။)
ဒီအကြောင်းလေးကို… မြန်မာပြည်က… စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကောက်နေတဲ့.. ခန္ဓာကိုယ်အပြည့်အစုံရှိပြီး.. (အဟာရချို ့တဲ့ပေမယ့်)ကျမ်းမာနေတဲ့ ကလေးတွေကို ..ခဏခဏပြောပြသင့်တယ်..။
မိဘမဲ့ကလေးဂေဟာက ကလေးတွေကိုလည်း ပုံပြင်လုပ်ပြီး ပြောပြသင့်တယ်..။
Boy Needs Cancer Treatment, Sells 3,000 Drawings
A 5-year-old boy with cancer is selling drawings of monsters to help pay for his treatments. Aiden Reed, living in Kansas City, was diagnosed last September.
The hospital bills were already coming in for chemotherapy and medications, and his parents were about to sell their house. But then he grabbed some markers and started drawing colorful monsters while in the hospital bed. He ended up selling over 3,000 drawings for more than $30,000. The amount is currently enough to pay for all of his cancer treatments and more.
This is what he says about his drawings: ”I kind of like to draw knights and jesters and scary clowns and aliens. I like to dress up as nice clowns and scary ones. If I wasacomic character I would be like the Green Goblin flying around throwing pumpkin bombs.”